sitrana DWG Avy amin'i Temporary fisie
Home Products DataNumen DWG Recovery sitrana DWG Avy amin'i Temporary fisie
Rehefa alefa ao amin'ny AutoCAD ny endri-javatra Autosave dia hanao izany mamorona rakitra nomaniny ho azy rehefa manamboatra sary. Amin'ny alàlan'ny default, ny rakitra backup dia ho voatahiry amin'ny tempo Windowsrary lahatahiry ary ny fanitarana rakitra dia .sv $.
Rehefa misy ny voina data, ohatra, ny AutoCAD dia mianjera na tapitra tsy ara-dalàna mandritra ny fotoana iray, azonao atao ny mamerina angon-drakitra voatahiry ao.Anarana $ rakitra amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny rakitra autosave, fanovana anarana ny.Anarana $ fanitarana ny .dwg ary avy eo manokatra izany rakitra izany ao amin'ny AutoCAD. Ny fisie autosave dia ahitana ny fampahalalana sary rehetra toy ny tamin'ny fotoana nihazakazahan'ny autosave farany.
Raha mitatitra hadisoana AutoCAD rehefa manokatra ilay rakitra autosave izay nomena anarana dia midika izany fa ny rakitra autosave dia simba na simba ihany koa noho ny lozam-pifamoivoizana.
AutoCAD dia manana baiko "Recover" namboarina izay azo ampiasaina hamerenana ilay rakitra autosave simba na simba, toy izao manaraka izao:
Safidio ny menio File> Utilities fanaovana sary> sitrana
Ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Select File (boaty fifanakalozan-kevitra amin'ny fisafidianana rakitra), ampidiro ny anaran'ny fisie sary maloto na simba na safidio ilay rakitra.
Ny valin'ny fanarenana dia aseho eo amin'ny varavarankely an-tsoratra.
Raha azo averina ilay rakitra dia hosokafana amin'ny varavarankely lehibe ihany koa izy.
Raha tsy azo averina amin'ny AutoCAD ilay rakitra, dia azonao atao ny mampiasa ny vokatray DataNumen DWG Recovery hanamboatra ny rakitra autosave maloto ary hamaha ny olana.
Sample autosave santionany: sample_autosave.sv $
Fahatakarana ny fisie backup AutoCAD sy ny autosave